शिक्षकले कहिले पिठियुँमा धाप मार्ने,गाला चिमोट्ने गरेका त छैनन् ? - नेपालबहस
शिक्षकले कहिले पिठियुँमा धाप मार्ने,गाला चिमोट्ने गरेका त छैनन् ?
| १७:०४:५० मा प्रकाशित
२३ माघ, टीकापुर । पछिल्यो समय बालबालिका माथि हुने दुव्यवहारहरु दिनप्रतिदिन बढ्दै गईरहेका छन् । यस्ता खालका दुव्यवहार तथा गलत छुवाईले बालबालिकामाथि मानसिक समस्यासंगै उनीहरुको पढाईमा समेत असर परेको छ । यस्तै समस्या भोगेकी छिन् कैलालीकी एक किशोरीले । अहिले उनी १७ वर्षकी भइन् र १२ कक्षामा पढ्दै छिन् । सोहि किशोरी आठ कक्षामा अध्ययनरत रहँदा उनले नराम्रो छुवाइको पीडा भोगिन् । उनलाई पढाउने आफ्नै शिक्षकको व्यवहारले पढाइमा समेत असर प¥यो ।
चौध वर्षमा शिक्षकको दुव्यवहार खेपेकी उनले नौ कक्षा पढ्दा शिक्षकको व्यवहारकै कारण विद्यालय बदल्नुप¥यो । पढाइमा उत्कृष्ट उनलाई पढाउने शिक्षकले कहिले पिठ्यिँुमा धाप मार्ने, कहिले गाला चिमोट्ने, कहिले आँखाको इशारा गर्ने गर्थे । बालिकालाई शिक्षकको व्यवहार अनौँठो लाथ्यो । शिक्षकको व्यवहारले पीडा महशुस हुन थालेपछि उनलाई विद्यालय जान मन लाग्ग पनि छाड्यो र पढाइ पनि बिग्रियो ।
सधैँ कक्षामा प्रथम वा द्वितीय आउने उनी अर्धवार्षिक परीक्षामा दशौैँ स्थानमा पुगिन् । उनी विद्यालयमा शिक्षकको गलत व्यवहार र घरमा अभिभावकको गाली सहन वाध्य भइन् । “बाबा आमाले छोरी ठूली भई, बिग्रन थाली भन्न थाले, मेरो बानीमा आएको परिवर्तन देखेर मलाई गलत ठान्न थाले”, उनी सम्झन्छिन्, “ओहो सम्झँदा पनि पीडा हुन्छ । म त निदाउन पनि नसक्ने भएँ । मलाई रातदिन तनावले पिरोल्न थाल्यो ।”
छोरीको व्यवहारमा परिवर्तन आएपछि एक दिन किशोरीकी आमाले छोरीलाई एक्लै राखेर सोधिन् । किशोरीले आमासँग विद्यालयमा भोगिरहेको घटना सुनाइन् । आमाछोरीले शिक्षकलाई भेटेर त्यस्तो व्यवहार नदोहो¥याउन आग्रह गरे । शिक्षकले माफी मागे । उनले माया गरेर त्यसो गरेको बताए । अब त्यस्तो व्यवहार नगर्ने भनेपछि किशोरी खुशी भएर विद्यालय जान थालिन् तर शिक्षकले व्यवहार सुधारेनन् । उनले चार÷पाँच दिनपछि थप हिंसा गर्न थाले । गलत छुवाइको पीडामा किशोरीको एक वर्ष बित्यो । उनले राम्रो नतिजा ल्याउन सकिनन् ।
त्यस्तै कक्षा ७ मा अध्ययनरत अर्की किशोरी छिमेकीको घरमा ट्युसन पढ्न जान्थिन् । छिमेकमा रहेका दाइ नाता पर्ने उनका आफन्तले धेरै बालबालिका जम्मा गरेर ट्युसन पढाउँथे । किशोरी पनि स्कूलबाट फर्केपछि एक घण्टा उनको घर पढ्न जान्थिन् । धेरै विद्यार्थीका बीचमा पनि उनले हिंसा सहन्थिन् । दाइ नाता पर्ने उनले उनको गाला चिमोट्थे, तिम्रो गाला रातो भाछ भन्थे, नाक तान्थे । किशोरीलाई त्यो व्यवहार मन पर्दैनथ्यो । “मलाई उनले छुँदा नरमाइलो लाग्थ्यो । म डरले काप्थेँ, पसिना आउँथ्यो”, उनी भन्छिन्, “आमाले पढ्न पढाउथे, म तनाव झेलेर फर्कन्थेँ ।”
गलत छुवाइ बाल यौन हिंसाको शुरुआतको चरण हो । छुवाइलाई मानिसले सामान्यरुपमा लिन्छ । माया गरेको भनेर गरिने यस्ता व्यवहारले बाल मस्तिष्कमा गलत असर परेको हुनसक्छ । “बाल यौन हिंसा न्यूनीकरणका लागि यसरी बालबालिकालाई माया गरेको बहानामा छुने कार्य गलत हो”, टीकापुर नगरपालिका महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण शाखा प्रमुख सङ्गीता शाह भन्छिन् ।
सङ्गीता अभिभावकले बालबालिकाले आफूमाथि भइरहेको गलत व्यवहार वा हिंसा खुलाउने खालको वातावरण तयार गर्नुपर्ने बताउछिन् ।
अधिकारकर्मी कल्पना उपाध्याय यस्ता हिंसा छोरीले बढी सहनुपर्ने भएकाले छोरीलाई यौन हिंसा, दुव्यवहार सहनु हुन्न भन्ने ज्ञान पहिल्यै दिन आवश्यक रहेको बताउछिन् ।
शिक्षिका माया साउद शिक्षकले बालबालिकाको मनोविज्ञान बुझेर अध्यापन गर्न आवश्यक रहेको बताउछिन् । बालबालिकाले भोग्ने यस्ता घटना प्रहरीसम्म निकै कम पुग्छन् । सामान्य व्यवहार हो भन्दै माफी दिने वा त्यस्तो व्यवहार गर्ने व्यक्तिबाट टाढिने गरिन्छ । प्रहरी कहाँ बलात्कार प्रयास वा बलात्कारका घटना भएमात्र उजुरी गर्ने गरिन्छ ।
इलाका प्रहरी कार्यालय टीकापुरमा आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा जबर्जस्ती करणीका नौ, जबर्जस्ती करणी उद्योगका पाँच मुद्दा दर्ता भएका थिए । आव २०७७÷७८ को हालसम्म जबर्जस्ती करणीका चार र जबरजस्ती करणी उद्योगतर्फ एक मुद्दा दर्ता भएका छन् । प्रहरी निरीक्षक अरुण बम गलत छुवाई सहनुप¥यो भनेरै उजुरी आउनेक्रम कम रहेको बताउछन् ।
कर्णालीका सुर्खेतबाहेक सबै जिल्ला कोरोना सङ्क्रमणमुक्त ६ मिनेट पहिले
नेपालमा मंगलबार थप ७८ जना कोरोना संक्रमित ११ मिनेट पहिले
नेप्सेमा वाणिज्य र विकास बैंकको शेयर सूचीकृत, कुनको कति ? २२ मिनेट पहिले
सत्तारुढ दलको सत्ताको झगडाले देश संकटग्रस्त : राप्रपा २५ मिनेट पहिले
नरहरिनाथको योगदान भावी पुस्तासम्म लगिनुपर्छ २६ मिनेट पहिले
दोभान आगलागीबाट भएको क्षतिप्रति भण्डारीद्धारा दुःख व्यक्त ३० मिनेट पहिले
दोभान आगलागीबाट ७९ घरपरिवार विस्थापित ३४ मिनेट पहिले
गुल्मीमा बेपत्ता भएको १८ दिनपछि युवतीको शव फेला ३७ मिनेट पहिले
चलचित्र मिररमा आर्यन र उपासनाको जोडि ४२ मिनेट पहिले
बी एण्ड सी अब छिट्टै मेडिकल कलेज बन्ने : ओली ४४ मिनेट पहिले
बिएण्डसी कलेज सम्बन्धनमा हस्तक्षेप भएको भनी आपत्ति ५१ मिनेट पहिले
वसन्तपुर क्षेत्रका अनधिकृत पसलहरु हटाउन सात दिने अल्टीमेटम, नटेरे कारवाही २ घण्टा पहिले
खानेपानी संस्थान उपमहानगरपालिकाको मातहतमा ३ घण्टा पहिले
चीनले अनुदानमा नेपाललाई थप ३ लाख डोज खोप दिने १९ घण्टा पहिले
लक्षित समूहमध्ये आधाभन्दा कमले मात्रै लगाए कोरोना खोप ६ दिन पहिले
मापदण्डविपरीत व्यवसायीले बगर उत्खनन गर्दै ५ दिन पहिले
विप्लव समूहका ३ जना कार्यकर्ता सप्तरीबाट नियन्त्रणमा ३ दिन पहिले
विद्यालयमा आगलागी हुँदा एक करोडको क्षति ३ दिन पहिले
अदालतबाट कैद सजाय पाएर फरार व्यक्ति पक्राउ ५ दिन पहिले
पर्यटकको आकर्षण बन्दै छहरा झरना ४ दिन पहिले
गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा सामुदायिक विद्यालयको स्तरोन्नति गरिदै २ हप्ता पहिले
बुढीखोलास्थित नहरको संरचना अत्यधिक जोखिममा ३ हप्ता पहिले
आन्तरिक गुटबन्दी र भागबन्डा छाडेर आन्दोलनमा जुट्न कोइरालाको आग्रह ४ हप्ता पहिले
भोजपुरमा हावाहुरी पीडितलाई राहत वितरण ४ महिना पहिले
ग्लोबल आइएमइ बैंकको एटिएम सेवा बन्द २ वर्ष पहिले
कोरोनाले सुर्खेतका संक्रमितको बाँकेमा मृत्यु ५ महिना पहिले
सेञ्चुरी बैंककाे खुद मुनाफामा ३५ % काे आकर्षक बृद्धि, जगेडा कोष र संचित मुनाफा दुवै बढ्यो १ वर्ष पहिले